Weight, Stress and Sleep - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” အိပျစကျခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှု နှငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ “
ပတျဝနျးကငျြမှာ မကွာခဏကွားရလရှေိ့တဲ့ ” မဝဘဲနမေလား…. တဈခြိနျလုံးအိပျနတောကို !!! ” ဆိုတဲ့စကားဟာ မှနျပါရဲ့လား?
ကောငျးမှနျစှာ အိပျစကျခွငျးဟာ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခဖြို့အတှကျ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
(တနညျးအားဖွငျ့ အိပျရေးမဝသူတှအေနနေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျတကျလာနိုငျတယျလို့ ပွောခငျြတာပါ။)
– ဆိုလိုတာက ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးဖို့ဆိုရငျ အစားအစာကို ထိနျးသိမျးစားသောကျခွငျး၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကသားလုပျခွငျးတို့ နညျးတူ အိပျရေးဝဝအိပျခွငျးဟာလညျး အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍတဈခုအနနေဲ့ ပါဝငျပါတယျ။
လုံလောကျတဲ့အိပျခြိနျရှိမှသာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ လုပျငနျးစဉျတှေ ပုံမှနျလုပျဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အိပျခြိနျနညျးပါးပွီးအိပျရေးမဝသူ (သို့) လုံးဝမအိပျသူ မြားမှာ ခန်ဓာကိုယျမှ အစာစားခငျြစိတျဖွဈပျေါစတေဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျ(hunger hormones)မြား ပိုမိုထှကျနှုနျးမြားလာပွီး အစားစာခငျြစိတျ ပိုမိုဖွဈပျေါလာသောကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ပိုတကျနိုငျပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုကလညျး ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ ဆကျစပျနတောတှရေ့ပါတယျ။
သုတသေနပွုလုပျခကျြမြားမှ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြား အရ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ စိတျဖိစီးမှုမြား ခံစားနရေသူ တဈယောကျဟာ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှေ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျဆောငျနရေငျတောငျမှ ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးဖို့ခကျခဲ (သို့) ကိုယျအလေးခြိနျပိုတောငျ တိုးလာနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုမြားနသေူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ကယျလိုရီမြားတဲ့အစားအစာတှကေို ပိုမိုတောငျးတလရှေိ့ကွတာမို့ ထိုသူတှဟော အခြိုနဲ့အငနျဓာတျမြားတဲ့ အသငျ့စား အစားအစာတှကေို ပိုမို ခုံမငျတတျကွပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ တိုးလာလရှေိ့ပါတယျ။
ဤ ဖွဈစဉျကို စိတျညဈညဈနဲ့စားခွငျး (emotional eating) လို့ ချေါပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျကိုယျအလေးခြိနျတဈခုရရှိဖို့ဆိုရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားအစာမြားရှေးခယျြစားသုံးဖို့အပွငျ ကောငျးမှနျလုံလောကျတဲ့အိပျစကျခွငျးနဲ့ စိတျဖိဆီးမှုလြှော့ခရြနျပါလိုအပျကွောငျး ဗဟုသုတမြှဝလေိုကျရပါတယျ။
” အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် “
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏကြားရလေ့ရှိတဲ့ ” မဝဘဲနေမလား…. တစ်ချိန်လုံးအိပ်နေတာကို !!! ” ဆိုတဲ့စကားဟာ မှန်ပါရဲ့လား?
ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
(တနည်းအားဖြင့် အိပ်ရေးမဝသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။)
– ဆိုလိုတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့ဆိုရင် အစားအစာကို ထိန်းသိမ်းစားသောက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကသားလုပ်ခြင်းတို့ နည်းတူ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခြင်းဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။
လုံလောက်တဲ့အိပ်ချိန်ရှိမှသာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းပါးပြီးအိပ်ရေးမဝသူ (သို့) လုံးဝမအိပ်သူ များမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှ အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်(hunger hormones)များ ပိုမိုထွက်နှုန်းများလာပြီး အစားစာချင်စိတ် ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ပိုတက်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ဆက်စပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
သုတေသနပြုလုပ်ချက်များမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စိတ်ဖိစီးမှုများ ခံစားနေရသူ တစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေရင်တောင်မှ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့ခက်ခဲ (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတောင် တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများနေသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကယ်လိုရီများတဲ့အစားအစာတွေကို ပိုမိုတောင်းတလေ့ရှိကြတာမို့ ထိုသူတွေဟာ အချိုနဲ့အငန်ဓာတ်များတဲ့ အသင့်စား အစားအစာတွေကို ပိုမို ခုံမင်တတ်ကြပြီး ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာလေ့ရှိပါတယ်။
ဤ ဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စားခြင်း (emotional eating) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများရွေးချယ်စားသုံးဖို့အပြင် ကောင်းမွန်လုံလောက်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဖိဆီးမှုလျှော့ချရန်ပါလိုအပ်ကြောင်း ဗဟုသုတမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။